Igodo 4 maka agbamakwụkwọ zuru oke | Bezzia
Igodo 4 maka agbamakwụkwọ zuru oke
Maria onyekwere | 08/09/2021 10:00 | Agbamakwụkwọ
Gịnị dị mkpa ka agbamakwụkwọ wee zuo oke? Enwere ọtụtụ ihe ị ga -ekpebi, ọtụtụ mmadụ ga -akpọtụrụ, na ọ nweghị onye ga -eju anya na ọtụtụ mmadụ na -ewere ọrụ ụlọ ọrụ. ọkachamara na atụmatụ agbamakwụkwọ ma ọ bụ onye na -eme atụmatụ agbamakwụkwọ.
Otu n'ime igodo ime ememe agbamakwụkwọ zuru oke bụ ldowe nzukọ siri ike nke nkwadebe ọ bụla. N'ihi na mgbakwunye na agụụ na ịnụ ọkụ n'obi, enwere agwa ndị ọzọ dị mkpa iji chee ọrụ ahụ gara aga dịka ndidi na nhazi. Enwere igodo ole na ole maka agbamakwụkwọ zuru oke yana ọtụtụ n'otu oge.
1 Egwu ọma
2 Ebe kwesịrị ekwesị
4 Ndị ọbịa agbamakwụkwọ ahụ
Ezi nhazi bụ isi ka ụbọchị agbamakwụkwọ ahụ bịa ihe niile na -arụ ọrụ dị ka igwe mmanu zuru oke. Na ndị ọbịa agaghị echere na ebe oriri ogologo oge ka nwanyị na -alụ nwanyị ọhụrụ na -abịarute, na ha maara ebe ha ga -aga mgbe niile, na oge nchere adịghị oke n'etiti efere ma ọ bụ na ozugbo oriri ma ọ bụ ememe onye ọ bụla nwere ike ịla n'ụlọ ozugbo enwere ike bụ igodo agbamakwụkwọ zuru oke.
Enwere ọtụtụ ihe ị ga -eburu n'uche na ọ na -esiri ike izu ike na agbamakwụkwọ wee nwee ọ enjoyụ ma ọ bụrụ na ị ga -ama ihe ndị ahụ niile na onye mbụ. Ya mere, ọtụtụ ndị mmadụ na -agba nzọ inyefe na inwe onye ọkachamara na nzukọ n'akụkụ gị n'ụbọchị dị mkpa dị ka nke a. Ọ dị mfe nghọta, nri?
Ebe kwesịrị ekwesị
Ebee ka a ga -eme agbamakwụkwọ ahụ? Nke a bụ otu n'ime mkpebi kacha mkpa na nwunye na nwunye ga -eche ihu. Di na nwunye na -edokarị anya maka ụdị mmemme ha chọrọ, ma ọ bụ agbamakwụkwọ obodo ma ọ bụ agbamakwụkwọ okpukpe, mana ọ bụghị nke ukwuu ebe ha chọrọ ime emume a na oriri na -eso ya.
Ruo afọ ole na ole gara aga, mkpebi a dị mfe. A na -ebelata mmemme site n'ụlọ ikpe gaa na ụka ma na -enwekarị oriri na nkwari akụ na nnukwu ụlọ oriri. Otú ọ dị, taa, ohere ndị a enweghị njedebe: ugbo, ụlọ ugbo, ubi…. niile dị maka ndị agbamakwụkwọ.
Ezigbo ihe bụ ịkụ nzọ oghere ebe mmadụ niile ga -enwe ahụ iru ala; ma anyị enyi nwoke na ndị ọbịa. Kedu ihe anyị na -aghọta site na ntụsara ahụ? Echekwala na ị nọ ebe ịnọ ma ọ bụ mee ka ike gwụ gị; mee ka ọ bụrụ ebe na -eme ka ahụ ruo ha ala ozugbo.
Ọzọkwa, ma ọ bụrụ na ebe adịghị eru, anyị ga -enye ndị ọbịa anyị ụzọ ha ga -esi bịa. Kpọọ ọrụ ụgbọ ala nke nwere ike buru ụzọ buru ndị ọbịa gaa oriri na mgbe ahụ, na njedebe nke oriri ahụ, gaa n'ụlọ ha.
Nkọwa dị ezigbo mkpa ma nwee ike gbanwee ebe. Okooko osisi na ọkụ nwere ike bụrụ abụọ n'ime ihe kachasị mkpa ma a bịa n'ihe ịchọ mma agbamakwụkwọ. Ha abụọ nwere ikike mee oghere ka ọ nabata gị ma maa mma.
Okooko osisi dị mkpa na tebụl. Dị ka o kwesịrị, jikọta ebe dị ala na elu iji nye mmegharị; ya mere ndị na -aghọta nka a tụrụ aro ya. Ma ọ bụrụ na mmefu ego siri ike, ị nwere ike dochie ifuru na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Ọkụ bụ isi, na mgbakwunye na ime oghere ka ọ nabata ma mara mma, iji megharịa ya na awa dị iche iche n'ụbọchị. Ezi ọkụ dịkwa mkpa maka nweta ezigbo foto. Ọ bụkwa ihe nchekwa. Ọ bụrụ na oriri ahụ bụ n'abalị, anyị ga -ahụrịrị na ndị ọbịa chọtara ụzọ ọkụ niile.
Ndị ọbịa agbamakwụkwọ ahụ
N'agbamakwụkwọ, ndị ọbịa bụ ihe kacha mkpa. Ha ga -enwerịrị ahụ iru ala mgbe niile, mara ebe ha ga -aga, otu na mgbe ha ga -esi ruo ebe ahụ. Na mgbakwunye, anyị ga -enyerịrị ndị na -eme njem ozi gbasara obodo ahụ, dịka o kwere mee, ụzọ anyị ga -esi aga na agbamakwụkwọ ma ọ bụrụ na nke a abụghị ebe enwere ike ịnweta.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ị nweta nkọwa na ndị ọbịa Nke kacha mma bụ ịkụ nzọ na ihe bara uru ha ga -eji mee agbamakwụkwọ ma ọ bụ n'ụlọ. Anyị na -ekwu maka espadrilles, ndị fan, plaids, ịchafụ ... dabere na oge ị lụrụ, otu ma ọ bụ nke ọzọ ga -aga nke ọma.
Anyị na -ekwu okwu oge niile gbasara ndị ọbịa ma ọ bụ ya họrọ ndị ọbịa nke ọma ka ha nwee anụrị Ọ bụ otu n'ime igodo kacha mkpa maka agbamakwụkwọ zuru oke. Site na ịhọrọ nke ọma anyị pụtara ịkpọ ndị anyị nwere ahụ iru ala n'etiti anyị. Agbamakwụkwọ a ga -abụ ụbọchị dị mkpa, mara mma mana ọ na -atụ ụjọ nke ukwuu, yabụ na ọ ka mma ka a gbaa ya gburugburu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » si ebi ndụ » Agbamakwụkwọ » Igodo 4 maka agbamakwụkwọ zuru oke
Nnukwu ọnọdụ na agba ntutu maka ọdịda a
Omume na -enye aka na -ewusi di na nwunye ahụ ike